Myanmar Muslims are proud of ABSDF-N SMAR Nyi Nyi’s beard | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The Karen Human Rights Group: Burma Army’s ‘shoot on sight’ order still in use
ကျွန်တော်သာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ သမ္မတ ဖြစ်မည်ဆိုလျှင် (၁) »
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Asia, Burma, Muslim, Myanmar, Rakhine State, Rohingya people, Thein Sein
This entry was posted on September 6, 2012 at 5:28 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Myanmar Muslims are proud of ABSDF-N SMAR Nyi Nyi’s beard”
ABSDF မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်ဒေသ ကျောင်းသားများ သတ်ဖြတ်ခံရမှု တရားခံများ နိုင်ငံတော်မှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးသည်ဖြစ်စေ ခွင့်မလွတ်နိုင်ဟု
၁၉၉၂ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းက ABSDF မှ မြောက်ပိုင်း ပါဂျောင်ဒေသတွင်ကျောင်းသားများအား သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူတရားခံစာရင်းပြုစုထားပြီးဖြစ်၍ လူထုထောက်ခံဆန္ဒပြုလက်မှတ်များ ရယူကာ နိုင်ငံတော်သို့တင်ပြသွားမည
ာ ကျောင်းသားဟောင်း ဦးဆမားညီညီက ပြောသည်။
ယခုအမှုကို အဖွဲ့လိုက်စုပေါင်းတရားစွဲဆိုရန် စီစဉ်ထားပြီး တရားခံစာရင်းပြုစုထားပြီးဖြစ်ကာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ထံ တင်သွင်းသွားမည်ဟုပါဂျောင်ဒေသမှလွတ်မြောက်ခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ၄င်းကပြောသည်။
ထိုသို့တင်သွင်းရာတွင် ပြည်သူများထံမှ ထောက်ခံဆန္ဒမဲလက်မှတ် တစ်သောင်းခန့်ကောက်ခံသွားပြီး ပူးတွဲတင်ပြသွားမည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့နောက်အမှုအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ပေးရန် နိင်ငံတော်သို့တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့မှစုံစမ်းစစ်ဆေးထားသည့်ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ၍တရားစီရင်ပေးရန် တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
“ ဒီမြောက်ပိုင်းဖြစ်ပျက်ပွဲမှာ အမှန်တကယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဥက္ကဌရော်နယ်အောင်နိုင်(wrongly wrote as ဒင်) နဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ၊ ဒေါက်တာနိုင်အောင်၊ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ကိုသန်းဇော်တို့ကို ပထမဦးဆုံးတာဝန်ရှိသူများအဖြစ် ဖြည့်စွက်ထားကြောင်းလည်း ဦးဆမားညီညီက ဆိုသည်။